Dutchtown, စိန့်လူးဝစ္စ, MO • DutchtownSTL.org တွင်ဖြစ်ပျက်သည့်နေရာများ
Dutchtown နေရာများ: အဖြစ်အပျက်နေရာများ
အနုပညာရှင်အနုပညာ ဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုကိုအမှတ်တရဖြစ်စေရန်အာမခံထားသောအထူး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည့်ရင်းနှီးချစ်ခင်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
314-898-3535 • facebook.com
စိန့်လူးဝစ်, MO ကို 63111
314-231-4808 • thebluffsonbroadway.com
Broadway မှ Bluffs အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Grand Cross ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့်ပွဲစီစဉ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cross Grand အကြောင်းနှင့် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်သူတို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီကဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ အတူ ပူးပေါင်း. Missouri-Metro.com.
3304 Meramec စိန့်
314-719-6593 • crossgrand.com
Cross Grand အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
အင်ပါယာခန်းမ ခြာရိုကီအနုပညာခရိုင်၏ဗဟိုချက်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ dance ည့်သည် ၁၂၀-၂၀၀ မှ (ည့်သည်များ (ကုန်းကြမ်းပြင်အရွယ်အစားနှင့်တီးဝိုင်းသို့မဟုတ် DJ သတ်မှတ်ချက်များပေါ် မူတည်၍) သို့မဟုတ်ကော့တေးပါတီအတွက်လူ ၃၀၀ ကိုဤ ၃၆၀၀ စတုရန်းပေနေရာသည်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဂျက်ဖာဆန်ဘဏ်အဆောက်အအုံသည်ယခုတွင်နေအိမ်ဖြစ်သည် Rita Ford လူထုစင်တာ.
ဂျက်ဖာဆန်ဘဏ်အဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
3303 Meramec စိန့်
Liermann Loft အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
စိန့်အန်တိုနီ၏ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ခန်းမသည်ဖြတ်သန်းသွားသည် Padua ၏စိန့်အန်တိုနီယို Meramec လမ်းပေါ်မှာ။ ငါးကြော်များ၊ ခွေးလှေးစျေးကွက်များနှင့်အခြားနေရာများအတွက်နေရာဖြစ်သည်။
3135 Meramec စိန့်
314-655-0550 • stanthonyofpaduastl.com
Gravois ပန်းခြံရှိ St. Matthew ဘုရားကျောင်းကိုဟောပြောပွဲခန်းမနှင့်အဖြစ်အပျက်နေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
314-632-6418 • treffpunktstl.com
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ အဖြစ်အပျက်နေရာများ